Kayah Investment Opportunity – KIC
Kayah Investment Opportunity
ထီးစဲခါးရေတံခွန်သည် လွိုင်ကော်မြို့မှ (၁၆)မိုင် အကွာအဝေးတွင်ရှိပြီး ကယားပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် နယ်စပ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ပြည်တွင်းဘုရားဖူးခရီးသွားဧည့်သည်များ အဓိကလာရောက် လည်ပတ်အပန်းဖြေနေသည့်နေရာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ သင်္ကြန်ကာလနှင့် သီတင်းကျွတ်ကဲ့သို့သော တရား၀င်ရုံးပိတ်ရက်များတွင် အထူးစည်ကားလျက်ရှိပါသည်။
ပန်ပက်ကျေးရွာသည် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်း တည်ရှိပြီး လွိုင်ကော်မြို့ မှ (၂၆) မိုင် တွင်တည်ရှိပါသည်။ကယန်းလူမျိုးများ၏ ဇာတိကျေးရွာ ဖြစ်ပါသည်။ လူထုအခြေပြု ခရီးသွား လုပ်ငန်းများ ဖော်ဆောင်ထားရှိသည့် ကျေးရွာ ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ခရီးသွား ဧည့်သည်များ လာရောက်လည်ပတ်နေကြသည့် ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း ကယန်း လူမျိုးတို့၏ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဝတ်စား ဆင်ယင်မှုများ၊ကိုးကွယ် ယုံကြည်မှု ၊လက်မှုလုပ်ငန်းများ၊စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း များနှင့် ကယန်းရိုးရာ အစားအသောက်များကို ဆန်းသစ်တီထွင်၍ ပြည်တွင်း ၊ ပြည်ပ ခရီးသွား ဧည့်သည်များကို ဆွဲဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
တနီးလာလဲကျေးရွာနှင့် ကန်ခုနှစ်ဆင့်ရေကန်သည် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်း တည်ရှိပြီး လွိုင်ကော်မြို့၏ (၁၃)မိုင် အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ တနီးလာလဲကျေးရွာသည် လူထုအခြေ ပြုခရီးသွားလုပ်ငန်းများဖော်ဆောင်ထားရှိသည့် ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပြီး ကယား တိုင်းရင်း သားများ နေထိုင်ရာ ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ် ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း နွားလှည်းစီးခြင်း၊ လေးဂွ ပစ်ခြင်း၊ ကယား ရိုးရာ အသားကင် များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကျေးရွာရှိ တံခွန်တိုင် နှင့်ကြာကန်သို့ သွားရောက် လည်ပတ် ခြင်း၊ ကယားရိုးရာ အိမ်များသို့ သွားရောက်လေ့လာ လည်ပတ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
ဒေါတမကြီးကျေးရွာသည် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်း တည်ရှိပြီး လွိုင်ကော်မြို့မှ (၃၉)မိုင် ၊ တွင်တည်ရှိပါသည်။ ကယားလူမျိုးများ နေထိုင်ရာ ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကယားရိုးရာအိမ်များ၊ နတ်ဆရာ အိမ်နှင့် ကျေးရွာအပြင်ဘက်ရှိ စပါးသိုလှောင်ထားသည့် အိမ်များ သည် ခရီးသွားပြည်သူများ အတွက် ဆွဲဆောင်နိုင်သည့် ကျေးရွာ ဓလေ့များဖြစ်ပါသည်။ ကယား ရိုးရာဝတ်စာဆင်ယင်မှုနှင့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများကိုလည်း ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ထားမှုကို တွေ့မြင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ထေခိုကျေးရွာသည် ဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းတည်ရှိပြီး လွိုင်ကော်မြို့မှ (၄၂)မိုင် အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကယောလူမျိုးများ အဓိကနေထိုင်ရာ ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတည်ရှိသည့် နေရာသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှပသာယာမှုများကြောင့် ခရီးသွားပြည်သူ များကို ဆွဲဆောင်နေသည့် နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်ကြသည့် ကယော တိုင်းရင်းသူများသည် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားကြပြီး ကယောလူမျိုးတို့၏ ရိုးရာဓလေ့များသည်ခရီးသွားဧည့်သည်များကို ဆွဲဆောင်လျက်ရှိနေပါသည်။
လွိုင်ကော်-မိုးဗြဲရေတံခါး-ဖယ်ခုံ-အင်းလေး ခရီးစဉ်နှင့် မိုးဗြဲရေတံခါး ဖြတ်ကျော်ခရီးစဉ် အားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ မိုးဗြဲ ရေတံခါး အဖွင့်အပိတ် ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ရေလမ်းကြောင်း တစ်လျှောက်ရှိ ရှုခင်းများ ခံစား လေ့လာနိုင်သည့် ခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ပါသည်။
Khin Maung Nyunt Trading Co.,Ltd. နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ TEBIAN Electric Apparatus Stock Co.,Ltd. (TBEA) တို့ ပူးပေါင်း၍ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့အနီးရှိ နမ့်တဘက်ချောင်းပေါ်တွင် ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှု ခန့်မှန်းပမာဏ (၁၅၀) မဂ္ဂါဝပ် ထုတ်လုပ်နိုင်မည့်အဆိုပြုချက်ကို ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံသို့ ၁-၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှစတင်၍ အဆိုပြု တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် တရုတ်ပညာရှင်များပါဝင်သောအဖွဲ့ဖြင့် အကြိုလေ့လာဆန်းစစ်မှု (Pre- Feasibility Study ) ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ကြပြီးနောက် တွေ့ရှိချက်များကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံသို့အသေးစိတ် ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ တင်ပြချက်အပေါ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှစိစစ်ပြီးနောက် Feasibility Study အတွက် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာနနှင့် MOU ရေးထိုးနိုင်ရေးကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်းကို ၃၀-၄-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသို့ ညှိနှိုင်းအကြောင်း ကြားစာ တင်ပြထားခဲ့သော်လည်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနမှ ၎င်းတို့၏မူဝါဒများကိုသာပြန်လည် အကြောင်းကြားခဲ့ ပါသည်။ MOU ရေးထိုးခွင့်ရရှိမည်ဆိုပါက ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် Feasibility Study ကို ၎င်းတို့၏ ရာနှုန်းပြည့် စိုက်ထုတ်ငွေဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ နွားလဝိုးကျေးရွာတွင်တည်ရှိပြီး၊ စက်မှုဇုန်အား အပိုင်း(၁)နှင့် အပိုင်း(၂) ဟူ၍ ခွဲခြားထားပြီး၊ အပိုင်း (၁)သည် ပြည်နယ်အစိုးရမှဖော်ထုတ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အပိုင်း(၁)၏ မြေဧရိယာမှာ၈၁၇.၄၆ဧကကျော်ရှိပြီး အပိုင်း(၂)၏ မြေဧရိယာမှာဧက (၅၀၀) ကျော်ဖြစ်ပါသည်။ အပိုင်း(၁)မှာ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းကြီး (၂၈)ခုရှိပြီး၊အသေးစားစက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းပေါင်း (၄၉၆) ခု ရှိပါသည်။ အပိုင်း (၁) တစ်ခုလုံးအတွက်လျှပ်စစ်မီးရရှိမှုကို ဓါတ်အား ခွဲရုံမှ ၅ MW ရရှိပါသည်။ အပိုင်း (၂) မှာစက်မှုဇုန် လျာထားမြေဖြစ်ပြီး သတ္တုသန့်စင်စက်ရုံကို ဖက်စပ်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ ဝါသောခိုကျေးရွာအုပ်စုအနီးရှိ ထုံးကျောက်တောင်အား ညီညာစွမ်းအား လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ထုံးကျောက်စမ်းသပ်တိုင်းတာရေးနှင့် ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း လေ့လာရေး ဆောင်ရွက်ခွင့်ကို သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကို တင်ပြ လျောက်ထားခဲ့ရာ အဆိုပါဦးစီးဌာနမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလမ်းညွှန်ချက်အရ နည်းဥပဒေပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်စာဖြင့်ပေးပို့လျောက်ထားသွားရန် အကြောင်းပြန်ကြားခဲ့ ပါသည်။
ငွေတောင်ဆည်ဝန်းကျင်တွင် အပန်းဖြေစခန်းများ တည်ဆောက်၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းများ
ကယားပြည်နယ်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ ငွေတောင်ဆည်ဝန်းကျင်တွင် Nature Sign Company Limited မှ အပန်းဖြေစခန်းများတည်ဆောက်၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မြေအသုံးပြုခွင့်အား ( ) ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ စီးပွားရေးရာ ကော်မတီသို့ တင်ပြပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ထီးပရူးနူး သဘာဝလှိုဏ်ဂူ သစ်တောအခြေခံခရီးသွားနှင့်အပန်းဖြေစခန်းလုပ်ငန်း
ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ မိုဆိုကျေးရွာအုပ်စု၊ မိုသီဒိုကျေးရွာအရှေ့ ထီးပရူးနူး သဘာဝလှိုဏ်ဂူတွင် သစ်တော အခြေခံခရီးသွားနှင့် အပန်းဖြေစခန်း လုပ်ငန်းအားဆောင်ရွက်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် Soppai Co.,Ltd မှ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်း (၅၀) ဧကအား မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေး ဗဟိုကော်မတီသို့ တင်ပြလျောက်ထားဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ ရာဧပရာကျေးရွာအုပ်စု၊ ခေါပါကျေးရွာအနီးရှိ ဆင်ဖြူတောင်တွင် သဘာဝ အပန်းဖြေစခန်းလုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ကယောရွှေပြည်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်း (၂၀၀) ဧကအား မြေအသုံးပြုခွင့်ရရှိရေး ပြည်နယ် လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျောက်ထားဆဲဖြစ်ပါသည်။
ထီးဆိုဒွတ် သစ်တောအခြေခံခရီးသွားနှင့် အပန်း ဖြေစခန်းလုပ်ငန်း
ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ ထူးချောင်းကြိုးပြင်ကာကွယ်တော အကွက်အမှတ် (၂၁၅)၊ သစ်တောမြေ (၇၁.၄၅)ဧကတွင် ထီးဆိုဒွတ်သစ်တောအခြေခံခရီးသွားနှင့် အပန်းဖြေစခန်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် Soppai Co.,Ltd မှ သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ နှစ်ရှည် ငှားရမ်း ခွင့်ရရှိရန် လျှောက်ထားခဲ့ရာ စီမံချက်တွင် သစ်မာစိုက်ခင်း ထည့်သွင်းရေး လမ်းညွှန်ထား ပါသဖြင့် အစီရင်ခံစာ တင်ပြရန် ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါသည်။
Ardent Alliance Co.,Ltd သည် စွန့်စားခရီးသွားလုပ်ငန်း (ကနူးကယက် လှေခရီးစဉ်)ကို Site ၄ မျိုးခွဲ၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Site(1)ကို ဘောလခဲမြို့ ၊ ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးအနီးရှိ ရေလယ်ကျွန်း (၂.၈)ဧကတွင် မြေအသုံးပြုခွင့် ရရှိပြီးဖြစ်ပါ၍ မြေပြုပြင်ခြင်း ၊ လမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် သစ်သားတံတားထိုးခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ Site(2) ဖြစ်သော ဘောလခဲမြို့နယ်၊ ရေနီပေါက်ကျေးရွာ၊ ကြိုးတံတားအနီး၊ ဘောလခဲ-ဖားဆောင်း ကားလမ်းဘေး သစ်တောမြေနေရာ (၃၅)ဧက နှင့် Site(4) ဖြစ်သော ပွန်ချောင်းနှင့် ထူးချောင်းဆုံရာနေရာ၊ ဘောလခဲ-ဖားဆောင်း ကားလမ်းဘေးရှိ သစ်တောမြေ (၁.၃၈)ဧကနှင့် (၂၀)ဧက တို့ကို သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြေငှားရမ်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုရေး ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါ သည်။ Site (3) မှာ ချိကွဲ့ကြိုးတံတားထိပ် တောင်ကုန်း တွင် (၉.၉၄)ဧက ရှိပြီး ပြည်နယ် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ မှတစ်ဆင့် မြေလွတ်၊ မြေလပ် နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲမှု ဗဟိုကော်မတီသို့ မြေအသုံးပြုခွင့်ရရှိရေး တင်ပြထားပါသည်။
ရွာသစ်မြို့တွင် ရေတံခွန်အပန်းဖြေစခန်း တည်ဆောက်၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းများ
ရွာသစ်မြို့တွင် Nature Sign Company Limitedမှ ရေတံခွန်အပန်းဖြေစခန်း တည်ဆောက်၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းအား မြေအသုံးပြုခွင့်လျောက်ထားလွှာကို ပြည်နယ်မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီသို့ တင်ပြ ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။
မယ်စဲ့မြို့နယ်၊ နယ်စပ်ဂိတ် ဘီပီ ၁၃ အနီးတွင် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်နှင့် အခြားဆက်စပ် လုပ်ငန်းဇုန်များအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း
Kayah Development Co.,Ltd မှ မယ်စဲ့မြို့နယ်၊ နယ်စပ်ဂိတ် ဘီပီ ၁၃ အနီးတွင် တိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေးမှုဇုန် (၁၀)ဧကခန့်၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဇုန် (၂၀) ဧကခန့်၊ စက်မှုလက်မှုဇုန် value added ဇုန် (၂၀၀) ဧကခန့်၊ Logistic Hub (၂၀၀)ဧကခန့်၊ Duty Free Shopping Zone (၁၀)ဧကခန့်၊ ကလေးကစားကွင်းနှင့် အပန်းဖြေဇုန် (၅၀)ဧကခန့်၊ Residential Housing Zone (၅၀)ဧကခန့်၊ Hotel and Entertainment Zone (၅၀)ဧကခန့်၊ သစ်တောစိုက်ပျိုးရေးဇုန် (၁၀၀၀)ဧကခန့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ပြည်နယ်အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။